I-FAQ yabasakazi be-Ulive.Chat
Ngibhalisela kanjani ukuba umsakazi?
Ukuze uthole imali emakamelweni ethu okuxoxa, awudingi i-akhawunti ekhethekile. Vele uqale ukusakaza, uqoqe ababukeli, futhi uthole izinhlamvu zemali.
Ngibhalisa kanjani njenge-ejensi?
Dala ama-akhawunti womsakazi ngamunye futhi uwavumele asakaze njengabasebenzisi abajwayelekile.
Eyodwa nje. ama-akhawuntali we-Broadcasterultiple umsebenzisi ngamunye akavunyelwe. Sicela uqinisekise ukuthi usebenzisa i-akhawunti eyodwa kuphela kuwo wonke amadivayisi wakho ukuze uvikele ukuhlaba umkhosi ngama-akhawunti amaningi.
Ngabe kuyadingeka ukuba umsakazi ochwepheshe?
Umuzwa wokusakaza awudingekile ukusakaza futhi uthole imali nathi. Ukuba nobungane nokuzethemba kuyizidingo kuphela.
Ngabe kufanele ngikhumule izingubo zami?
Cha, insizakalo yethu yokuxoxa ngevidiyo yenzelwe izithameli ezi-12+. Hlangana nababukeli bakho bese ubanikeza umbukiso ngaphandle kokuzenzisa okungenangqondo. Ukuze uthandwe ku-Ulive.Chat chat roulette bese wenza imali eningi uxoxe nje nababukeli bakho futhi ungasishiyi isibhamu isikhathi eside.
Ingabe ikhona imithetho noma imingcele ekusakazeni?
Izibukeli zethu zithanda ukusakazeka okuhle nokukhanya okuhle. Izibukeli ze-Ulive.Chat.live zingaba neminyaka engu-12 ubudala, ngakho-ke ngicela ugcine izambatho zakho ngenkathi zikukhamera.
Xoxa nababukeli bakho futhi ube nobungane.
Ukusakazwa okungafanele kuvunyelwe kumakamelo engxoxo womphakathi. Ukusakaza kwakho kungahanjiswa esigabeni sabadala noma kuvinjelwe.
Ukuya ocansini kwikhamera, izenzo zokuya ocansini eziphambukayo (i-BDSM enzima, i-zoophilia, i-pedophilia), ukuzibulala nokusebenzisa kabi izidakamizwa kwenqatshelwe ngokuphelele. Ukwephulwa kwale mithetho kubangela ukuvimba okwenziwe ngabaphathi.
Abasakazi kumele babe neminyaka eyi-18 noma ngaphezulu. Ababukeli kumele babe nama-12 noma ngaphezulu.
Yiluphi ulimi okufanele ngilukhulume?
Kuya ngesibukeli sakho esiseduze. Qala ngesiNgisi; lulimi oluvame kakhulu phakathi kwabasebenzisi bethu. Kamuva ungazama ukufundisa othile umusho noma amabili ngolimi lwakho lwendabuko uma enentshisekelo.
Kungani ngibona uphawu [oluzisa isandla sakho] uphawu? Ingabe kukhona engikwenzayo okungalungile?
Akukho lutho olubi ongalwenza. Siphikelela ukuthi kube nokuqukethwe okuhlukile futhi lokhu kuvezwa okulula kuqinisekisa ukuthi abasakazi bethu abazisebenzisi i-bots, okunye ukuphindisela, kanye nokunye ukuqoshwa kweqembu lesithathu.
Kuthiwani uma ngangivinjelwe?
Xhumana nethimba lethu lokuxhaswa kwezobuchwepheshe. Ungacelwa ukuba uchaze ngokucacile ukuthi ukusakaza kwakho kumayelana nobani noma ukufakazela iminyaka yakho ngokuthumela i-ID.
Zonke izicelo ezivela kubasakazi zidluliselwa kwinsizakalo ye-VIP futhi zibhekwana ngokushesha okukhulu. Izicelo zisingathwa ngokulandelana kwamukelwa kepha ukubambezeleka kungenzeka ngezikhathi zezikhathi zekholi ephezulu.
Xhumana neLive.Chat Support
Ngingasebenza kuphela kumodi ebukhoma?
Qopha umsakazo wakho ukuze wenze imali noma ungekho endaweni yengxoxo. Vula ukuqoshwa kwimenyu enkulu. Ukusakazwa okurekhodiwe kungatholakala egumbini lakho lokuxoxa.
Ngibaheha kanjani ababukeli ekusakazweni kwami?
Zama okuthile okusha, bonisa amathalenta akho, futhi okubaluleke kakhulu, uxoxe nababukeli bakho. Ungangeza nencazelo ekusakazweni kwakho bese umeme abasebenzisi egumbini lokuxoxa lomphakathi. Yonke imifudlana edumile ibekwa phezulu ngokuzenzakalelayo futhi ihehe ababukeli abaningi.
Sabalalisa isixhumanisi sokusakazwa kwakho ngokusebenzisa abezindaba zenhlalo, amawebhusayithi, izinkundla zokuthola okuningi.
Ngiqala kanjani ukuthola imali?
Uma uqoqa ababukeli abanele (100 noma ngaphezulu), umsebenzi wokusakaza okhokhelwayo uvulwa ngokuzenzakalelayo. Ekuqaleni, konke ukusakazwa kukhululekile ababukeli, kepha usazothola izinhlamvu zemali bese ababukeli bengakuthumelela izipho ezingeziwe.
Abasakazi abavunyelwe ukukhangisa izinsiza ezivela eceleni, bameme abasebenzisi, noma basebenzise izindlela zokukhokha zabantu besithathu ngesikhathi sokusakazwa okukhokhelwayo.
Uma ababukeli bakho besakaza abaningi, ukhokhelwa kakhulu. Ukuheha izibukeli ezintsha ukwenza imali eningi!
Ngabe izingcingo eziyimfihlo ziyakhokhelwa?
Yebo! Njengoba uthola ababukeli abaningi uzothola okuningi ngokusakazwa nezingcingo eziyimfihlo. Akukho mkhawulo noma imali efihliwe.
Yini izinhlamvu zemali? Yini ebaluleke?
Uhlamvu lwemali yimali yangaphakathi yewebhusayithi. Abasebenzisi bazithenga ukuze bakukhokhele, bathenge izipho futhi banikeze okukhokhelwayo. Izinhlamvu zemali zinezilinganiso ezingaguquki zama- $ 1 kuye ku-5000 zemali. Imali ikhonjiswa ngezinhlamvu zemali.
Ngingayibona kuphi ibhalansi yami yemali?
Inani lezinhlamvu zemali ku-akhawunti yakho liboniswa ngaphezulu kwemenyu enkulu. Umlando ophelele womsebenzi ungatholakala egumbini lakho lokuxoxa.
Yimalini encane yokuhoxiswa?
Njengamanje, $ 10 inani elincane lokuhoxisa.
Ngingayikhipha kangaki imali?
Asinayo imikhawulo yokuthi ungakhipha kangaki imali. Ungacela ukukhokha nganoma yisiphi isikhathi, uma nje usufinyelela ibhalansi elincane lama- $ 10.
Yiziphi izindlela zokuhoxa?
Okwamanje, ungasebenzisa i-Bitcoin Wallet noma i-Yandex.Money.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhipha imali?
Ukudlulisa kuvame ukufika ezinsukwini ezingama-2-3.
Ngingakwazi ukuvimba umsebenzisi?
Ungafaka igama lomsebenzisi ohlwini ukuze uvimbele ekuhlupheni. Futhi ungavimba abasebenzisi nganoma yisiphi isikhathi.
Ngingakwazi ukuvimba abantu abavela ezweni elithile ukuthi babuke ukusakazwa kwami?
Yebo. Khubaza izwe elilodwa noma amaningi kuzilungiselelo.
Ingabe umsebenzisi angangeza kuzintandokazi zabo?
Kunjalo. Uma umsebenzisi ekubhalisele, bazothola isaziso uma ukusakaza kwakho bukhoma. Bonke ababhalisile babona ukusakazwa kwabo okuthandayo kwimenyu ekhethekile.
Kungenzeka yini ukusakaza kusuka kufoni ephathekayo?
Yebo, konke okudingeka ukwenze ukulanda uhlelo lokusebenza lwe-Android noma i-iOS.
Ingabe ikhona ingxoxo yamahhala? Ngabe iyakhokhelwa?
Ngokuzenzakalelayo konke ukusakazwa kukhululekile. Sicela abasebenzisi ukuthi bakhokhe kuphela uma ukusakazwa kunababukeli abayi-100 noma ngaphezulu.
Yini okufanele ngiyenze uma ikhamera ingasebenzi noma ingxoxo iqandisiwe?
Qala kabusha isiphequluli noma uhlelo lokusebenza kuqala. Uma lokho kungasizi ukuxhumana nethimba lethu lokuxhaswa lobuchwepheshe futhi uchaze kabanzi imininingwane. Namathisela izithombe-skrini uma kungenzeka.
Imigomo YokusebenzisaInqubomgomo yobumfihloCreator Agreement Affiliate agreementUkuxhaswa
Yiba ngumenzi wokuqukethweUhlelo lobumbanoI-FAQ